Sargaal katirsan Daacish oo lagu dilay duqeyn kadhacday buuraleeyda Puntland.. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandSargaal katirsan Daacish oo lagu dilay duqeyn kadhacday buuraleeyda Puntland..
Sargaal katirsan Daacish oo lagu dilay duqeyn kadhacday buuraleeyda Puntland..
July 29, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Dowladda Maraykanka ayaa duqayn ku dishay Sarkaal ka mid ah kooxda Dawladda Islaamiga ah ee Fadhiisimada ku leh Waqooyiga Soomaaliya (Buuralayda Galgala), sida uu qoraal ku sheegay Taliska Ciidammada Maraykanka ee Afrika, Axaddii.
Taliska Ciidammada Maraykanka ee Afrika ma sheegin War faahfaahsan oo ku saabsan Duqaymaha ay Sabtidii toddobaadkan Diyaaradahoodu ka geysteen Buuralayda Golis.
Al-shabaab oo ah Urur ugu weyn ee kooxaha Xagjirka ah ee ka jira Soomaaliya ayaa la bah ah Al-qaacid, laakiin waxay si joogto ah ula dagaalamaan Daacishka Soomaaliya.
Weerarrada dhanka Cirka ah ee Dawladda Maraykanku ka fuliso Soomaaliya ayaa ah kuwa joogto ah oo lagu taageerayo Dawladda Daciifka ah ee Qaramada Midoobay taageerto ee Soomaaliya, taasi oo Al-shabaab la dagaalamaysey sanado.
Africom ma sheegin Magaca sarkaalka ay dileen iyo Jinsiyaddiisa midna.
Akhriso:- Maxay ahmiyad ah oo ay leedahay xuska aasaaska puntland xilli dayac badan uu jiro?.
Akhriso:- DFS oo markale war aan caadi ahayn kasoo saartay musiibadii dowladda hoose ee xamar.